The novelties chịkọtara si aga 3 nke gam akporo 11 Ndị Mmepe | Gam akporosis
Erughị otu ụbọchị gara aga na Preview 3 si gam akporo 11 Ndị Mmepe nakwa na ọ na-egosi ụzọ Google ga - eso maka akụkọ banyere sistemụ arụmọrụ ya maka igwe eji arụ ọrụ. Anyị ga-anakọta ụfọdụ akụkọ anyị ga-ahụ na mmelite ndị na-esote nke ọkwa ndị na-eme omenala.
Pixels bụ ndị mbụ na-enweta nlele nke atọ nke gam akporo Developer for Android 11 yana n'etiti akwụkwọ akụkọ ya ọ bara uru ịsị na ha metụtara akụkụ kachasị emetụ ndị mmepe aka; n'agbanyeghị na n'ikpeazụ anyị ga-erite uru na ha site na ịnụ ụtọ ahụmịhe ka mma site na -atọ ndị ọzọ ngwa. N'ezie, enwerekwa ozi ndị ọzọ nwere ike ịmasị anyị.
1 Mgbanwe kachasị mkpa maka ndị mmepe
2 Gam akporo 11 ugbu a kagburu ikike nke ngwa ndị nwere nkwarụ
3 A na-ebelata ozi ịgha azụ
4 Ntanetị Ethernet
5 A na-akpọzi olu olu ka ""da"
6 Nseta ihuenyo na bọtịnụ òkè na recents
Mgbanwe kachasị mkpa maka ndị mmepe
Anyị na-aga ogologo na isi:
Ntọala maka mmepụta API nke ngwa na nke ahụ ga - enyere onye nrụpụta aka ịmata ka ngwa ndị ahụ si achọpụta yana ihe kpatara ya mgbe ewepụrụ ngwa
Nyocha GWP-ASan enwere ike ịrụ ọrụ maka ngwa ma si otú a na-enyere nchekwa nchekwa
ADB na-agbakwunye, nke ahụ na-enye gị ohere ịnwale n'ụzọ dị mfe ngwa ndị ahụ nwere gigabytes nke ozi dịka egwuregwu
E degharịrị ntọala iji nyochaa data nweta: ụfọdụ API na-erite uru site na akwụkwọ ọhụrụ a ma na-enye ndị mmepe ohere ịghọta nke ọma otu onye ọrụ si enweta ma jiri data ahụ
Nbuputa ikukuma ọ bụ na ADB karịrị WiFi agbanweela kpamkpam
Gam akporo 11 ugbu a kagburu ikike nke ngwa ndị nwere nkwarụ
Anyị nwere ugbua kwuru banyere awa ole na ole gara aga banyere ihe ọhụrụ a na ihe ma ọ bụrụ na ọ na-egosi omume ka mma nke usoro nke mere na lekọta iwepu ngwa ikikere na anyị anaghị eji. Ee, ndị anyị na-edebe ihe fọdụrụ na sistemụ yana anyị na-eji site n'oge ruo n'oge.
Ikike ndị a ga-ewepụ bụ: igwefoto, kọntaktị, faịlụ na mgbasa ozi na mmega ahụ. Nnukwu ihe maka chekwaa akụrụngwa ma nwee ngwa ndị ahụ na-agba n'okirikiri na-ewere ozi site na ikikere ndị ahụ.
A na-ebelata ozi ịgha azụ
Ee, ọkwa ndị ahụ na-arụ ọrụ mgbe, dịka ọmụmaatụ, anyị na-edekọ ihuenyo mkpanaka, nwere ike ịbụ zoro na mmegharị ahụ ma belata nke mere na ha na-aga mara ndị ọzọ.
A na-eme ka ọ belata ka ọ nwere obere akara na-adọ aka ná ntị banyere ihe na-eme, ma nke ahụ anaghị ewe ohere dịka o nwere tupu 3 gara aga nke Android 11 Developers.
Gam akporo ngwaọrụ akwadoro mepụta eriri ikuku site na nhọrọ a. Ndị ọzọ okwu, jikọọ a USB ka anyị mobile n'ime a ụdị rawụta nke ngwaọrụ jikọọ site na eriri USB.
Nnukwu ihe dị na Ntanetị Ethernet bụ na ihe gam akporo ngwaọrụ nwere ike ugbu a ga-eji dị ka a na netwọk usu. Anyị na-ekwu maka atụmatụ nke ọtụtụ n'ime anyị agaghị eji, mana ọ na-atọ ụtọ ịnwe ya, dịka ọmụmaatụ, chọpụta PC ochie na ngwaọrụ ndị ọzọ yiri ya.
A na-akpọzi olu olu ka ""da"
Ire na ntọala niile maka ọkwa, oku, igwe na ihe ndị ọzọ, kama ịkpọ ya "Mpịakọta", Achọpụtara ugbu a dị ka ""da". Mgbanwe nke nwere ike iyi obere ihe, mana Google emeela ya n'ebumnuche n'ihi ụfọdụ ihe ọhụụ ọ na-eme n'oge na-adịghị anya.
Nseta ihuenyo na bọtịnụ òkè na recents
Agbakwunyerela bọtịnụ ọhụrụ abụọ na ihuenyo ahụ na nso nso a nke anyị nwere ike ịgbanwe n'etiti ngwa ọhụrụ anyị jiri. Ntọala ala anyị nwere nseta ihuenyo ahụ n'aka ekpe na bọtịnụ nkesa n'aka nri.
Nke mbu na-ewe nseta ihuenyo nke ngwa ọrụ, mgbe nke abụọ na-eme otu ihe ahụ, mana ịmalite windo nkekọrịta. Ọ dị mkpa ịmara na bọtịnụ abụọ a dochie ngwa ọdịnala kachasị amasị anyị nke anyị nwere ike ịhụ ọbụlagodi Samsung's One UI 2.1; echefula ozi kachasị mma maka Note10 + na Galaxy ọzọ.
una usoro nke obere ihe ohuru na ụdị nke 3 Nke ahụ tinye gara aga gam akporo 11 prerequisites Onye Mmepụta na anyị maara site na ndị uwe ojii gam akporo. Anyị ga-ahụ ndị nke fọdụrụ na ndị na-apụ n'anya na nsụgharị ikpeazụ nke gam akporo 11.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ozi kacha mkpa banyere gam akporo 3 Onye Mmepụta Preview 11
Google na akwado gi ka ijiri “Live captions” n'oge oku